Ogaden News Agency (ONA) – Hogaamiyaha Mucaaridka Ugandha oo Lagu Soo Eedeeyay Khiyaano-Qaran.
Hogaamiyaha Mucaaridka Ugandha oo Lagu Soo Eedeeyay Khiyaano-Qaran.
Posted by ONA Admin	/ May 15, 2016
Hogaamiyaha Mucaaridka dalka Uganda Kizza Besigye ayaa lagu soo oogay dacwad ah khiyaano Qaran kadib markii uu beeniyay in Madaxweynaha xilka haya Yuweri Musefeni uu doorashada ku guuleystay, Besigye ayaa sheegay inuu isagu yahay Madaxweynaha saxda ah.
Hogaamiyahan Kizza Besigye ayey marar badan xidheen ciidamada amaanka kahor doorashooyinka dalkaasi ka dhacay iyo waliba kadib, isagoo lagu eedeeyey inuu abaabulayay mudaharaadyo dowlada looga soo horjeedo.
Madaxweyne Yuweri Musefeni oo dalkaasi kasoo talinayey muddo 30 sano ah ayaa Khamiistii lasoo dhaafay markale loo dhaariyey xilka. Maalin kahor xaflada dhaarinta ayay ciidamada Amaanka xabsiga dhigeen Kizza Besigye oo lagu xidhay xabsi kuyaala magaalada Moroto oo 500-KM u jirta caasimada Kambala una dhaw xaduuda dalka Kenya.